အရေးပေါ်လှေကား ဂဟေဆက်ပြုတ်၍ လူတစ်ဦးသေဆုံး | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » အရေးပေါ်လှေကား ဂဟေဆက်ပြုတ်၍ လူတစ်ဦးသေဆုံး
အရေးပေါ်လှေကား ဂဟေဆက်ပြုတ်၍ လူတစ်ဦးသေဆုံး
Posted by the best on Sep 16, 2012 in Copy/Paste | 12 comments
ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ အမှတ်(၅) ရပ်ကွက်၊ ဟံသာရိပ်မွန်အိမ်ရာ၊ စံပယ်မာဃလမ်းရှိ
ခြောက်ထပ်တိုက်၊ ခြောက်လွှာနောက်ဖေးအရေးပေါ်လှေကား ဂဟေဆက်ပြုတ်၍
ဖြစ်စဉ်မှာ အိမ်ပိုင်ရှင် ဦးခင်မောင်ညွှန့်နှင့် ရင်းနှီးသူ ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်၊
အမှတ်(၁)အထပ်သားစက်ရုံ၊ လွှသွေးစက်ပြင်ဝန်ထမ်း ဦးသန်းဝင်းသည်
သေဆုံးသူ ဦးသန်းဝင်းနှင့် ရင်းနှီးသော အထပ်သားစက်ရုံဝန်ထမ်းတစ်ဦးကပြောသည်။
မကြာသေးခင်ကပဲ အလုံမြို့ နယ် အရေးပေါ်လှေကားကြောင့်
သက်ဆိုင်ရာက ဒီအရေးပေါ်လှေကားနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘယ်လိုဆောင်ရွက်ဖို့ 
ဘာမှသတင်းမှမထုတ်ပဲ မသိသလိုနေခဲ့တယ်။ အခုထပ်ဖြစ်ပြန်ပြီ။
ဒီအတွက်ကြောင့် မသိသလိုနေခဲ့တဲ့ သက်ဆိုင်ရာကို အပြစ်ပေးရတော့မယ်။
ဘယ်လိုအရေးယူမလဲ ဆိုတာ အစိုးရအဖွဲ့ က အမြန်ဆုံးဆောင်ရွက်သင့်ပါပြီ။
နောက်တစ်ယောက်ထပ်ဖြစ်လာရင်တော့ အစိုးရအဖွဲ့ ရဲ့ တာဝန်ဖြစ်သွားပြီ။
နှစ်ယောက်သေပြီဟေ့ .. ကြည့်ကျက် လုပ်ကြဦး …။
အရေးပေါ်လှေကားဆိုပြီး အရေးပေါ်တောင် မရောက်ကြဘူး ..ရေခဲတိုက်ထဲပဲ ရောက်ရောက်သွားကြတယ် ။
ဓါတ်ပုံ နဲ့သတင်းကို အောက်ပါ ဆိုက်တွင် ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
ကန်ထရိုက်တိုက် ခေတ်စကတည်းက ဒီအားနည်းချက်ကို မြင်မိပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် ဘယ် မီဒီယာ၊ အဖွဲ့အစည်း ကမှ ဘာမှမလုပ်ခဲ့ကြဘူး။ အခုတော့ အသက်တွေ… လေလွင့်ရပြီ။
ကျနော်တော့ သူတို့တွေ တိုင်းပြည်အတွက် အသက်ပေးသွားတယ်လို့ မြင်တယ်။
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဒီလို လူတွေသေတော့ မှ ဒီကိစ္စကို မီဒီယာတွေမှာ ဖော်ပြ၊ မီဒီယာတွေမှာ ဖော်ပြတော့ အများအာရုံစိုက်လာ၊ အများအာရုံစိုက်တော့ အဖွဲ့အစည်းတွေက လှုံ့ဆော်၊ အဖွဲ့အစည်းတွေက လှုံ့ဆော်တော့ သက်ဆိုင်ရာက ပြုပြင်ဖို့လုပ် နဲ့ တိုင်းပြည်ကောင်းသွားနိုင်လို့ပါ။
ဒါကြောင့် တိုင်းပြည်ကို ချစ်ရင် တောထဲတောင်ထဲ သွားစရာမလိုပါဘူး။ အခုပဲ တိုက်နောက်ဖေးထွက်ပြီး ပြနိုင်ပါပြီ။… နောက်တာနော်…
အင်း .. နေရင်းထိုင်ရင်း .. ဒုက္ခတွေ့ ရတာပါလား။ ကျွန်တော် ကတော့ လူနေခွင့် ချပေးတဲ့ ကိစ္စ ကို သိပ် မင်္သကာ ချင်ဘူးဗျာ … လူနေ လို့ ရတယ် အန္တရာယ် တစ်စုံတရာ မရှိ ပါဘူး လို့ ဆုံးဖြတ် ပေးခဲ့တဲ့ .. အဖွဲ့ အစည်း ကို စုံစမ်း သင့်တယ် ထင်တယ်။
စင်ကာပူကို အမှီလိုက်မယ်ဆိုတဲ့ ဘဘကြီး
ဘယ်မှာလည်း building code, standard, inspection????
ဂျပန်မှာလို ငလျင်လှုပ်လိုက်ရင်တော့ ဘုရား ဘုရား မတွေးရဲစရာပါလား……….
အမြန်ဆုံးစုံစမ်း စစ်ဆေး အရေးယူပေးကြပါဗျာ……မှတ်လောက်သားလောက်အောင်
၁၉၉၀ လောက်ကတဲက စားခဲ့ မြိုခဲ့တာ ကန်ထရိုက်ဘဝကနေ ကုမ်ပိုင်တွေတောင်ဖြစ်နေကြပေါ့
ဘယ်သူ့ကြောင့်ဖြစ်ရတာ … ဘယ်သူ့မှာ တာဝန်ရှိတယ် လို့
ပြောနေမယ့်အစား …. (ပြောနေလည်း ဖြစ်လာမှာမှမဟုတ်သေးတာ.. )
မိမိကိုယ်တိုင် သတိရှိရှိ နဲ့ ဆင်ဆင်ခြင် ခြင် ရှောင်ရှားနိုင်ဖို့ က ပိုပြီး အရေးကြီး တယ်လို့ ထင်ပါတယ် ….
မှတ်ချက် .. နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်များမပါ …
ချမ်းသာနေတာပဲ ဂျ …. အထက်လူဂျီးမင်းများတွင် ငွေရော လူရော … ပေါမှ ပေါ ..
သက်တမ်းကုန်အဆောက်အအုံအားလုံး ကြေငြာချက်ထုတ်ပြန်ပီး ဖြိုချသင့်ပါဒလယ်။ တာဝန်ရှိသူတွေက ပိုက်ဆံ / အာဏာ ရှိသူတွေကိုကြောက်နေရလို့ အလုပ်မတွင်ကျယ်တာပါ။ အူးကြောင်ပေါသလို အကုန်လုံးဖမ်းချုပ်ပလိုက်ကွာ ရှုပ်တယ်လို့ဘဲ ပေါဂျင်ပါဒယ်။